Namoaka zotra Prague-Larnaca vaovao i Cyprus Airways
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Namoaka zotra Prague-Larnaca vaovao i Cyprus Airways
Ny sidina voalohany an'ny Sipra Airways avy any Larnaca mankany Prague dia natao androany. Niala tao Larnaca ny sidina taorian'ny 11:00 maraina ary tonga tany Prague tamin'ny 13:40. Ny seranam-piaramanidina Prague dia niarahaba ny fiaramanidina Sipra Airways niaraka tamin'ny fiarahaban'ny tafondro rano sy ny fandraisana ireo vahiny sy mpandeha ofisialy teo am-bavahady, niaraka tamin'ny fanapahana tadin-tseranana nentin'ny seranam-piaramanidina.
Mampifandray an'i Larnaca sy Prague i Sipra Airways, isaky ny zoma ary manomboka amin'ny 2 jolay isaky ny alatsinainy sy zoma.
Momba ny Airprosy Sipra
Tamin'ny volana jolay 2016, Charlie Airlines Ltd, orinasa voasoratra anarana any Sipra, dia nandresy tamin'ny fifaninanana malefaka ho an'ny zony hampiasa ny mari-pamantarana Siprus Airways nandritra ny folo taona. Nanangana sidina ny orinasa tamin'ny Jona 2017 nankany amin'ny toerana 4.
Miorina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Larnaca i Sipra Airways. Ny sidina Sipra Airways rehetra dia miasa amin'ny fiaramanidina Airbus A319 maoderina manana seza 144 Economy Class.
Tanjona maharitra maharitra an'ny orinasa ny mandray anjara amin'ny fampitomboana ny fizahan-tany any Sipra, sady manitatra ny faravodilanitra ho an'ireo mpandeha eo an-toerana.
Momba an'i Prague
I Prague no renivohitra sy tanàna lehibe indrindra ao amin'ny Repoblika Tseky, tanàna faha-14 lehibe indrindra ao amin'ny Vondrona eropeana ary koa renivohitra manan-tantara an'i Bohemia. Any amin'ny avaratra andrefan'ny firenena eo amoron'ny ony Vltava, dia misy mponina 1.3 tapitrisa eo ho eo ny tanàna, raha ny velaran-tanànany lehibe kosa dia tombanana ho 2.6 tapitrisa ny isan'ny mponina. Manana toetrandro antonony ny tanàna, miaraka amin'ny lohataona mafana sy ny ririnina mangatsiaka.
Prague dia ivon-toerana ara-politika, ara-kolontsaina ary ara-toekarena any Eropa afovoany feno tantara manan-tantara. Niorina nandritra ny vanim-potoana Romanesque ary niroborobo tamin'ny vanim-potoana Gothic, Renaissance ary Baroque, i Prague no renivohitry ny fanjakan'ny Bohemia ary fonenan'ny Emperora Romana Masina marobe, indrindra fa an'i Charles IV (and. 1346–1378). Tanàna lehibe nananan'ny Monarchy Habsburg sy ny fanjakany Austro-Hongria izy. Ny tanàna dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny Fanavaozana Bohemia sy Protestanta, ny Ady Telopolo Taona ary ny tantaran'ny taonjato faha-20 ho renivohitr'i Tsekoslovakia, nandritra ny Ady Lehibe sy ny vanim-potoana kominista taorian'ny ady.